Tevere, imwe nzira yekuongorora mimhanzi muraibhurari yako yeApple Music | IPhone nhau
Tevere, imwe nzira yekuongorora mimhanzi muraibhurari yako yeApple Music
Kuteerera kumimhanzi ibasa rinoitwa nemunhu wese kamwe pazuva. Ndokusaka kuve neraibhurari yakanaka muapp yatiri kufarira kwakakosha kunakidzwa nemumhanzi watinofarira. Kutenda kumasevhisi ekushambadzira tinogona kuwana mimhanzi yese yatinoda tisingatombo kunetseka kuti tichava nerwiyo rwunodiwa here kutorwa pasi kana kwete. Kunyange zvakadaro, dzimwe nguva raibhurari yedu yemimhanzi yakakura uye zvakare playlists. Kutenda ku Next tinogona kuongorora raibhurari yedu yese yemimhanzi uye nekuiongorora nekutenda ku huwandu hwesarudzo uye playlist dzimwe nzira dzainotipa, zvinoenderana neraibhurari yedu yazvino.
Kuongorora raibhurari yako yeApple Music hakuna kumbove kuri nyore neKutevera
Inotevera ndiyo nzira yakapusa yekunakidzwa nenziyo dzaunoziva uye dzaunoda. Icho chikumbiro chauchazoda kushandisa mazuva ese.
Yedu raibhurari yemimhanzi yakakura. Tine zvakawanda zvekutamba uye nziyo dzatinowedzera asi tisingatomboteerera uye zvinonyadzisa. Kutenda neichi chishandiso, Tevere, tinogona kurangarira ndedzipi nziyo dzatinofarira, iwo atakaburitsa zvakanyanya, iwo atakasiya zvakanyanya uye, chokwadika, kuvandudzwa kwemitambo mitsva maererano nezvatinoda. Iko kunyorera kwakagadzirwa nekuda kweAPI MusicKit izvo zvinokutendera kuti ubatanidze Apple Music.
Kugona kushandisa chishandiso ichi zvakakwana, zviviri zvinodiwa zvinodiwa: Iva neApple Music account uye uine dzinenge zana nziyo mumitambo yekutamba. Kana izvi zvinodiwa zvangozadzikiswa, mashiripiti einotevera anotanga nemabasa ayo makuru:
Mashiripiti DJ: imwe yesarudzo dzakanakisa muapp. Dzvanya pane ichi chishandiso uye iwe utange kuteerera nziyo nenziyo kuti uchada, nekuti Inotevera inoongorora zvinyorwa zvako uye unozogadzira idzodzo nziyo dzaunonyanya kufarira uye kubva kune vaunofarira maartist. Iwe haufanire kuenda kuburikidza nerwiyo nekuti ese iwo anenge achange asarudzwa newe pane imwe nguva.
Zvinyorwa zvakarongedzerwa iwe: Kune zvakare chikamu chine zvinyorwa zvakasarudzika zvine chekuita neraibhurari yako uye mitambo yekutamba: «25 nziyo dzakanyanya kuridzwa», «inonyanya kuridzwa nemumwe muimbi», «nziyo dzakakanganikwa» ... muraibhurari yako yemimhanzi yawakateerera -mira munguva yakapfuura asi hauna kutamba munguva pfupi yapfuura.
Wakanganwa: Mune ino playlist uchawana idzo nziyo dzauinadzo muraibhurari yako asi dzausina kumbobvira watamba. Rangarira ivo!
Kana iwe uchida kunakidzwa nemabasa aya, iwe unofanirwa kuenda kuApp Store uye download Next, inobatsira uye inonakidza app nemutengo we5,49 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Tevere, imwe nzira yekuongorora mimhanzi muraibhurari yako yeApple Music
Almost € 6 kundidzidzisa nziyo dzandinotoziva kuti ndinofarira… NEXT !!
Sonos inotipa dhisikaundi inosvika makumi matatu muzana kana isu tichivandudza chero zvigadzirwa zvavo
Maitiro ekudzivirira kuwedzerwa kumapoka eWhatsApp pasina mvumo yako